15 Siyaabood oo Fudud oo Lagu Helo Kaararka Hadiyadda Xbox ee Bilaashka ah 2022 - Wareegga Hantida
Bogga ugu weyn 15 Siyaabood oo Fudud oo Lagu Helo Kaararka Hadiyadda Xbox ee Bilaashka ah 2022 -ka
15 Siyaabood oo Fudud oo Lagu Helo Kaararka Hadiyadda Xbox ee Bilaashka ah 2022 -ka
Had iyo jeer waa wax lagu farxo in la helo kaarka hadiyadda Xbox ee bilaashka ah ee ciyaaraha iyo madadaalada.
Miyaad raadineysaa habab sharci ah si aad u hesho kaarka hadiyadda bilaashka ah? Ma jeclaan lahayd inaad ogaato goobaha iyo app -ka ugu fiican ee bixiya kaarka hadiyadda Xbox ee bilaashka ah? Boggan waxaa ku jira 15 Siyaabood oo Fudud oo lagu heli karo kaararka hadiyadda Xbox ee bilaashka ah.
Tan iyo markii uu soo baxay internet -ka, dhowr siyaabood oo lagu fulin karo macaamil ganacsi oo onlayn ah iyada oo aan la adeegsan lacagta caadiga ah ayaa qaar ka mid ah lacagahaas dhijitaalka ah waxaa ka mid ah Xeerarka lacagta Xbox iyo bitcoins.
Qoraalkan, waxaan kugu hagi doonnaa sida loo helo Xbox ku noolow xor. Waxaa jira dhowr ilo oo sharci ah si aad u hesho hadiyado Xbox oo lacag la’aan ah iyo qeybaha soo socda waxay si faahfaahsan u tilmaamayaan 15 siyaabood ee ugu fudud ee lagu heli karo kaararka hadiyadda Xbox ee bilaashka ah.
15 Siyaabood oo Fudud oo Lagu Helo Kaararka Hadiyadda Xbox ee Bilaashka ah
Qeybtan waxaa ku jira 15 meelood si aad u hesho kaarka hadiyadda ee Microsoft Xbox oo lacag la’aan ah. Waxaa ka mid ah kuwan soo socda;
Swagbucks waxay ku saabsan tahay sida ugu wanaagsan ee lagu heli karo kaararka hadiyadda Xbox ee bilaashka ah. Waa shabakad iyo app caan ah oo la sameeyay 2008. App -ku wuxuu abaalmariyaa booqdayaasheeda/adeegsadayaasha inay qabtaan hawl yar markay booqdaan mareegaha.
Soo -booqdeyaashu waxay ku guuleystaan ​​dhibcaha (SB) marka ay sahaminta ka qaadayaan mareegaha. SB oo lagu qiimeeyay $ 0.01 ayaa markii dambe loo beddelay lacag ama kaararka hadiyadda ee Xbox.
Sidoo kale, waad guulaysan kartaa Xbox bilaash ah kaararka hadiyadda oo aan lahayn sahan. Si tan loo sameeyo, booqdayaashu waxay dhammaystiri doonaan hawlo kale sida daawashada fiidiyowyada gaagaaban ee mareegaha.
Waxaad ka soo furan kartaa dakhligaaga Swagbucks kordhinta $15, $25, iyo $50. Booqo mareegaha si aad u kasbato kaadhadh hadiyadeed Xbox oo bilaash ah maanta.
The InboxDollars waxaa la abuuray 2000. Websaydhku aad buu ula mid yahay Swagbucks. Websaydhku wuxuu u baahan yahay isticmaaleyaashiisa inay dhammaystiraan shaqooyinka sida daawashada fiidiyowyo gaagaaban, furitaanka emayl, u tixraaca xubnaha cusub shaqooyinka kale.
Iska diiwaan gelinta website-ka/app-ka gabi ahaanba waa bilaash, xubnuhuna waxay kasbadaan inta u dhaxaysa $0.25 iyo $1.25 dhamaystirka hawlaha. Kadib markaad dhamaystirto hawlo badan, waxaad xaq u yeelanaysaa inaad ku soo furato dakhligaaga lacag bixinta bangiga ama Xeerarka lacagta Xbox.
Tan iyo markii la furay mareegaha, Inboxdollars waxa ay xubnaheeda ku abaalmarisay in ka badan $50milyan oo isugu jirta lacag iyo kaarar hadiyadeed. Adiga sidoo kale waxaad noqon kartaa xubin oo aad kasbato bixinta kaadhka hadyada Xbox ee bilaashka ah.
#3. Ipsos i-Dheh
Kani waa il kale oo sharci ah oo laga helo kaadhadhka hadyada Microsoft Xbox ee bilaashka ah. Ipsos i-Say waa shirkad raadin suuq ah oo la aasaasay 1975 si ay dib ugu eegto waxqabadka badeecadaha suuqa.
Laakin laga soo bilaabo intarneedka, Ipsos i-Say waxa ay gashay onlayn, waxayna hadda qortaa xubno dad waynaha ka tirsan si ay gacan uga gaystaan ​​sahanno ku saabsan summadaha xidhiidhka la leh. Markaad sahan ka samayso mareegaha, waxaad kasbanaysaa, dhibcood loo yaqaan i-Say oo hadhow loo bedeli karo lacag ama kaadhadh hadiyadeed.
PointClub waa degel la mid ah Ipsos i-Say. Waa mid caan ah oo ka mid ah mareegaha sahanka ugu fiican agagaarka. Si aad sahan uga qaadato PointClub, waxaad u baahan doontaa inaad iska diiwaangeliso mareegaha marka hore oo marka laguu oggolaado barnaamijka, waxaad hadda bilaabi kartaa inaad lacag kasbato adigoo sahan ku qaadanaya internetka.
Isticmaalayaasha waxay kasbadaan inta u dhexeysa 200 iyo 2000 dhibcood si ay u dhammaystiraan sahanno gaar ah. Websaydhku waa fududahay in la isticmaalo. Kahor intaadan bilaabin hawl, waxaad arki doontaa kasbashada suurtagalka ah iyo waqtiga qiyaasta loo baahan yahay si loo dhammaystiro hawsha.
Sidoo kale, isticmaalayaasha waxaa la siiyaa dhibco gunno ah marka ay is-diiwaangeliyaan. Kadib markaad dhamaystirto hawlahaaga, waxaad haysataa ikhtiyaarka ah inaad ku furato dakhligaaga lacag ama sida Kaararka hadiyadda ee Xbox.
Sidoo kale Akhri: 13 Sahamin onlayn ah oo Lacag caddaan ah lagu bixiyo PayPal
Kani waa degel kale oo sahan ah oo lacag siiya isticmaaleyaashiisa dhammaystirka hawlaha. Websaytka waxaa la aasaasay 2007 waxaana hadda ku jira in ka badan 8 milyan oo adeegsadeyaal buuggiisa.
PrizeRebel waa mareeg sumcad leh oo la ogyahay inay siisay isticmaaleyaasheeda $ 16million oo lacag ah iyo kaararka hadiyadda tan iyo markii la aasaasay. Isticmaalayaasha waxay kasban karaan $ 10 furayaasha tooska ah ee Xbox ka dib marka la dhammaystiro sahan.
Sidoo kale, adeegsadayaashu way kasbadaan Xbox live codes ma jiro sahan si fudud adoo u gudbinaya xubnaha cusub mareegaha.
CashPirate waa mid ka mid ah siyaabaha ugu wanaagsan ee lacag bilaash ah looga sameeyo internetka. Waa app casri ah oo xiisa leh oo u ogolaanaya dadka isticmaala inay lacag ku helaan iyagoo si fudud u soo dejinaya oo ciyaaraya ciyaaraha.
Isticmaalayaashu waxay ku kasbadaan qadaadiicda burcad-badeedda iyagoo ciyaaraya ciyaaraha waxayna u rogaan lacag ama ciyaaro kaararka hadiyadda ciyaaraha.
#7. Qodobbada FeaturePoints
Ku kasbashada lacag iyada oo loo marayo FeaturePoints waa hab ka duwan hababka kor ku qoran. FeaturePoints waa degel iyo app lacag siiya isticmaaleyaasha si ay u soo dejistaan ​​oo dib ugu eegaan barnaamijyada websaydhka.
Si aad uga kasbato FeaturePoint, waxa kaliya oo aad u baahan tahay inaad sameyso waa soo dejiso barnaamij oo aad u isticmaasho ugu yaraan laba daqiiqo ka dib markaa waad tirtiri kartaa barnaamijka. Isticmaalayaasha waxaa laga yaabaa inay soo dejistaan ​​oo dib u eegaan barnaamijyo badan inta ay rabaan maalin kasta.
Waxa aad ku kasbatay dhibco adiga oo sameya kuwa kor ku xusan dhibcaha waxa lagu soo furan karaa lacag ahaan ama kaadhadhka hadiyadaha Xbox. 6000 dhibcood oo muuqaal ah ayaa qiimihiisu yahay $10.
AppBounty waxay la mid tahay qodobbada muujinta. Waa madal lacag siisa dadka isticmaala soo dejinta barnaamijyada internetka. Barnaamij kasta oo aad soo dejiso, waxaad kasbataa dhibco gaar ah. Isticmaalayaasha soo dejisa oo ciyaara ciyaaraha u baahan inay gaaraan heerar gaar ah waxay lacag badan ka helaan AppBounty.
App -ku waa sumcad sumcad leh waxaana la ogyahay inuu ku abaalmariyey isticmaaleyaasheeda ilaa $ 1million tan iyo markii la aasaasay. Isticmaalayaasha waxaa lagu yaqaanaa inay haystaan ​​ikhtiyaarka ah inay ku soo ceshadaan dakhligooda kaararka hadiyadda ee Xbox. Waxaad samayn kartaa in ka badan $ 5 iyo $ 10 kordhin.
Arag sidoo kale: Sida Loo Helo Kaararka Hadiyadda Amazon ee Lacag La'aanta ah: 24 Xeelado Lagu Helo Ilaa $ 100 Off
AppKarma waa app caan ah oo loogu talagalay isticmaalayaasha casriga ah. App-ka ayaa ku abaalmariya isticmaaleyaasha ku rakibida iyo ku ciyaarista abka kale. Sidoo kale, waxaad tilmaami kartaa adiga oo dhammaystiraya su'aalaha oo aad u tixraacayso isticmaalayaasha cusub mareegaha.
Barnaamijku wuxuu sii wadaa inuu caan ku noqdo qiimeynta 4.7 dukaanka ciyaarta ilaa waqtiga daabacaadda. Isticmaalayaasha appKarma waxay kaloo haystaan ​​ikhtiyaarka ah inay ku soo furaan kasbashada kaararka hadiyadda. 6000 dhibcood oo ku jira app -ka ayaa la sheegay inay qiimihiisu yahay $ 5 Kaararka hadiyadaha dhijitaalka ah ee Xbox Live
Perk waa barxad u baahan hordhac yar ama aan loo baahnayn dadka isticmaala internetka. Madalku waa degel bixiya xubnihiisa si ay u dhammaystiraan hawlaha yaryar. Si aad u kasbato hawsha, waxaad u baahan doontaa inaad booqato websaydhka ama soo dejiso barnaamijka si aad isu diiwaangeliso.
Markaad xubin noqoto, waxaad kasban doontaa dhibco si aad u dhammaystirto hawlaha sida daawashada tiyaatarada filimada, daawashada fiidiyowyada caanka ah, dhammaystirka su'aalaha, adeegsiga Perk Search oo ka mid ah hawlaha kale.
AppNana waa madal kale oo GPT ah oo laga heli karo dukaamada khadka tooska ah sida dukaanka ciyaarta. App-ku wuxuu u oggolaanayaa isticmaaleyaasha inay kasbadaan dhibco loo yaqaan Nana iyagoo dhammaystiraya hawlo ay ka mid yihiin soo dejinta ciyaaraha, daawashada fiidiyowyada, iyo u gudbinta isticmaaleyaasha cusub mareegaha.
Muuqaal gaar ah oo ku saabsan app -ka ayaa ah u oggolaanaya adeegsadayaasha inay ku cayaaraan ciyaaro lacag la'aan ah oo haddii kale u baahnaan lahaa mid inuu bixiyo lacag ka hor inta uusan ciyaarin. Nanas waxaa lagu soo furan karaa lacag ama kaararka hadiyadda ee Microsoft Xbox.
FreeMyApps waxay siisaa isticmaaleyaasheeda si ay u soo dejiyaan oo ay u isticmaalaan abka kale. App-ka ayaa ka duwan goobaha kale ee lacag-bixinta ah ee app-ka taas oo u baahan in isticmaalayaashu ay la falgalaan abka kale ugu yaraan 30 ilbiriqsi si ay u helaan dhibco.
Dhibcaha waxaa lagala noqon karaa lacag ahaan ama kaararka hadiyadda ee Xbox.
Ebates waa hab kale oo lagu kasbado furayaasha Xbox ee bilaashka ah. Waxaad xor u noqon kartaa kaararka hadiyadda ee Xbox adiga oo wax ka iibsanaaya dukaanka internetka.
#14. Abaalmarinta Xbox Live
Waxaad ku kasban kartaa kaararka hadiyadda Xbox ee bilaashka ah adiga oo iska diiwaangeliya Abaalmarinta Xbox Live. Ka dib markaad noqoto xubin, waxaa lagaa doonayaa inaad dhammaystirto hawl fudud oo kuu arki doonta inaad hesho kaararka hadiyadda ee bilaashka ah.
Grindabuck waa hab kale oo lagu kasbado kaararka hadiyadda ee bilaashka ah. Isticmaalayaasha waxay kasbadaan kaararka hadiyadda iyagoo fulinaya howlo fudud sida dhageysiga muusikada, daawashada fiidiyowyada howlaha kale.
Haddii aad booqato 15 -kaan degel ee aan liis -gareynay oo aad fuliso hawlo fudud oo ay iyagu ku taliyeen, waxaad heli doontaa kaarka hadiyadda ee Microsoft Xbox oo lacag la'aan ah. Wax badan ka baro Wareegga Maalka.
Sida Looga Bilaabo Shaqadaada Online ahaan Qoraa Mawduuc Madaxbanaan ah 2022
10 Siyaabood oo Fudud oo Lagu Bixin Karo Miisaanka 2022 -ka
Fiiri Faallooyinka (13)
Instagram waa mid ka mid ah aaladaha ugu kobaca badan ee leh in ka badan bilyan isticmaale. Ka noqoshada app-ka soo-socda…
10ka ugu sarreeya App -ka Wadaagga Faylka Faylka ee 2022
Xusuusnow markii aan ku tiirsanay barnaamij qaatay daa'im si loo wareejiyo hal fayl? waxaan ula jeedaa…
Dib -u -eegista App Trailers 2022: Ma Sharcibaa Mise Fiidiyaha Daawashada Fiidiyowga?
Inaad hesho xoogaa lacag ah wakhtiga firaaqada waxay u egtahay fikrad wanaagsan, miyaanay ahayn? Su'aashayda, si kastaba ha ahaatee,…
Cashapp Vs Venmo: Waa kuwee App -ka Lacag -bixinta Mobilka ugu Fiican
Ku -noqoshada lacag -la’aanta ayaa kuu oggolaaneysa inaad lacag xawilato adigoon la macaamilin lacag, jeegag boosto, ama aad booqato…
25+ Sahaminnada Lacag -bixinta ee ugu Fiican ee 2022 | Samee Lacag Sameynta Wax Yar
Mar kasta oo aad iibsatid badeecad ama aad macaash doontid adeeg, waxa hubaal ah in aad fikrad ka leedahay…
Waxaa laga yaabaa inaad ku jirto shaqada qoyska ama xafiiskaaga oo aad u baahan tahay lacag aad ku siiso…